Coincheck inozivisa refunds kutanga svondo rinouya - Blockchain News
Japanese cryptocurrency Exchange Coincheck vakazivisa kuti anoronga kubvumira vanoshandisa mubve yomunharaunda mari kubva munhoroondo yavo inotevera Chipiri.
Izvi anouya shure Hack musi Jan. 26, izvo zvakakonzera ane chimbichimbi basa shutdown. Coincheck akashevedza venhau pa iyo conceded kuti 500 NO miriyoni zviratidzo (munokosha kumativi $533 miriyoni panguva) yakanga yatorwa yaro digitaalinen wallets nomumwe mupasa.
In chiziviso takaisa nhasi, Kambani akati (Via shanduro ndibatsireiwo):
“pari zvino, midziyo yose makasitoma’ Yen vokuJapan vakakwanisa zvakanaka chevanorwara zvemari. Tichafara atangezve withdrawals kutanga February 13, 2018.”
Vatengi dzaifanira mari wakazviparadzanisa exchange sezvo ndikazvisimbisa vakatambura chii angangodaro aiva guru Hack munhoroondo cryptocurrency.
Gwaro zvemari muJapan, Financial Services Agency (FSA), akati panguva, “Kukodzera kurapa ezvinhu ngozi yakanga yava ndozvakajairwa pa Coincheck.”
Metatron anosunungura Kr ...
Cryptocurrency akakweretesa Blockfi anomutsa $ 1.55M mu mari
New York anotsanangura kutanga ...
Previous Post:Chii chakaitika kuna Binance Exchange uye kana vachiriita kutanga
Chikumi 11, 2018 pa 10:39 AM
Nyamavhuvhu 29, 2018 pa 8:36 AM